သွေးတိုးလို့ စိတ်မညစ် နဲ့တော့ဗျာ ဒီပုံထဲက လူကြီးကို ကျေးဇူး တင်တယ် – Let Pan Daily
သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာ ရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ ..ဒီပုံထဲကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ….သွေးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူး
လည်ပင်းတွေ အစ်ထလာပြီးစုံးဖမ်းသလို နတ်မမ်းသလိုလိုနဲ့ ဂေါင်းတွေကိုက် မျက်စိတွေမှုန်ဝါးလာပြီး ခြေထောက်တေလက်တေ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး လေငန်းဖြတ်ဖို့ချည်လုပ်နေတယ်….အရင် ၂ ခါလဲ လေငန်းဖြတ်ဖို့လုပ်လို ဆေးရုံ ပြေးရသေးတယ်….သူပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်ထား…..အခု သွေးမတိုးတော့ဘူး …..
သူပြောတာတော့ ၃ ရက် ဆက်တိုက် မနက် တကြိမ် နေ့လယ်တကြိမ် ညတကြိမ် ၃ ရက် ဆက်သောက်ရင် အနဲဆုံး ၆လ လောက်ကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ စားချင်တာစားလို့ရတယ်ဆိုပဲ…..ကျေန်ာကတော့အခုမှသောက်ထာဆိုတော့ သွေးတိုးကျတာပဲသိသေးတယ် ….ဓါတ်ပြောင်းတာဖြစ်မယ်….
ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရည်အကုန်နဲ့ ဖျော်….အမယ်နည်း ရှိသဗျ…..သံပုရာသီးကို တချမ်းခွဲ ဖန်ခွက်ထဲအရင်ထည့် အစေ့တွေဆယ်ပစ်လိုက်….ဘဲဥ ကို ခွဲထည့်လိုက် အဲဒါကို နာနာခေါက်ဖျော်လိုက်ဗျာ….
သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ရေအဆင်သင့်ယူထား…..အသက် ကို ဝအောင်ရှူပြီအောင့်ထားလိုက် ….ချိုက်ခနဲနေအောင်သောက်ချလိုက် ….အသက်မရှူနဲ့အုံးနော် …..သောက်ပီး ပလုပ်ကျင်းလိုက် ပီးမှအသက်ရှူ အနဲငယ်လောက်ပဲညှီနံ့ရပါတယ်…ဘဲဥဘာအရသာမှမရှိဘူး နဲနဲချင်တာပဲရှိတယ်….တနေ့၃ ချိန်ပေါ့နော် ၃ ရက် ဆက်သောက်ထာ သွေးတိုး ပြေးတော့တာပဲဗျို့
အဲ…သံပုရာသီးပါတဲ့အတွက် ဖျားနေသူများ မတည့်သေးပါ ….အဖျားပြတ်တော့ဆက်သောက်ပေါ့ ….အကိုက်အခဲပျော်ဆေးတွေနဲ့တော့ နီးနီးစပ်စပ်မသောက်ထာကောင်းတယ်…..
သွေးတိုးသမားတွေသောက်ကြစမ်းပါလို့တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်….ဖတ်မိတဲ့သူများ ရှယ်ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျား….။ ကျမ်းမာရေးမှတ်စုများ..သွေးတိုးလို့ စိတ်မညစ်နဲ့တော့ဗျာ.ဒီပုံထဲကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာသင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ ဒီပုံထဲကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ.သွေးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူး.
လည်ပင်းတွေအစ်ထလာပြီးစုံးဖမ်းသလိုနတ်မမ်းသလိုလိုနဲ့ ဂေါင်းတွေ ကိုက် မျက်စိတွေမှုန်ဝါးလာပြီး ခြေထောက်တေလက်တေ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး လေငန်းဖြတ်ဖို့ချည်လုပ်နေတယ်.အရင် ၂ ခါလဲ လေငန်းဖြတ်ဖို့လုပ်လို ဆေးရုံ ပြေးရသေးတယ်.သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ထား..အခု သွေးမတိုးတော့ဘူး ..
သူပြောတာတော့ ၃ ရက် ဆက်တိုက် မနက်တကြိမ် နေ့လယ်တကြိမ် ညတကြိမ် ၃ ရက် ဆက်သောက်ရင် အနဲဆုံး ၆လ လောက်ကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ စားချင်တာစားလို့ရတယ်ဆိုပဲ..ကျနော်ကတော့အခုမှသောက်ထာဆိုတော့ သှေးတိုးကတြာပဲသျိသေးတယျ .ဓါတ်ပြောင်းတာဖြစ်မယ်.
ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရည်အကုန်နဲ့ ဖျော်.အမယ်နည်း ရှိသဗျ..သံပုရာသီးကို တချမ်းခွဲ ဖန်ခွက်ထဲအရင်ထည့် အစေ့တွေဆယ်ပစ်လိုက်.ဘဲဥ ကို ခွဲထည့်လိုက် အဲဒါကို နာနာခေါက်ဖျော်လိုက်ဗျာ.သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ရေအဆင်သင့်ယူထား..အသက်ကို ဝအောင်ရှူပြီအောင့်ထားလိုက် .ချိုက်ခနဲနေအောင်သောက် ချလိုက် .အသက်မရှူနဲ့အုံးနော် ..
သောက်ပီး ပလုပ်ကျင်းလိုက် ပီးမှအသက်ရှူ အနဲငယ်လောက်ပဲ ညှီနံ့ရပါတယ်ဘဲဥဘာအရသာမှမရှိဘူး နဲနဲချင်တာပဲရှိတယ်.တနေ့၃ ချိန်ပေါ့နော် ၃ ရက်ဆက်သောက်ထာ သွေးတိုး ပြေးတော့တာပဲဗျို့..အဲ သံပုရာသီးပါတဲ့အတွက် ဖျားနေသူများမတည့်သေးပါ .အဖျားပြတ်တော့ဆက်သောက်ပေါ့ .အကိုက်အခဲပျော်ဆေးတွေ နဲ့တော့ နီးနီးစပ်စပ်မသောက်ထာကောင်းတယ်..
သွေးတိုးသမားတွေသောက်ကြစမ်းပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်.ဖတ်မိ တဲ့သူများ ရှယ်ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျား.
Credit – ကျမ်းမာရေးမှတ်စုမျာ
သှေးတိုးလို့ စိတျမညဈ နဲ့တော့ဗြာ ဒီပုံထဲက လူကွီးကို ကြေးဇူး တငျတယျ
သငျ့ ရှယျရာ တဈခကျြဖွငျ့ လူပေါငျးမြားစှာ ရဲ့ ဒုက်ခဝဒေနာကို ကယျတငျပေးလိုကျပါ ..ဒီပုံထဲကလူကွီးကို ကြေးဇူးတငျတယျဗြာ….သှေးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရငျမခံနိုငျတော့ဘူး
လညျပငျးတှေ အဈထလာပွီးစုံးဖမျးသလို နတျမမျးသလိုလိုနဲ့ ဂေါငျးတှကေိုကျ မကျြစိတှမှေုနျဝါးလာပွီး ခွထေောကျတလေကျတေ လေးလံထိုငျးမှိုငျးလာပွီး လငေနျးဖွတျဖို့ခညျြလုပျနတေယျ….အရငျ ၂ ခါလဲ လငေနျးဖွတျဖို့လုပျလို ဆေးရုံ ပွေးရသေးတယျ….သူပွောတဲ့ အတိုငျးလုပျထား…..အခု သှေးမတိုးတော့ဘူး …..
သူပွောတာတော့ ၃ ရကျ ဆကျတိုကျ မနကျ တကွိမျ နလေ့ယျတကွိမျ ညတကွိမျ ၃ ရကျ ဆကျသောကျရငျ အနဲဆုံး ၆လ လောကျကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ စားခငျြတာစားလို့ရတယျဆိုပဲ…..ကနြျောကတော့အခုမှသောကျထာဆိုတော့ သှေးတိုးကတြာပဲသိသေးတယျ ….ဓါတျပွောငျးတာဖွဈမယျ….
ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရညျအကုနျနဲ့ ဖြျော….အမယျနညျး ရှိသဗြ…..သံပုရာသီးကို တခမျြးခှဲ ဖနျခှကျထဲအရငျထညျ့ အစတှေ့ဆေယျပဈလိုကျ….ဘဲဥ ကို ခှဲထညျ့လိုကျ အဲဒါကို နာနာခေါကျဖြျောလိုကျဗြာ….
သောကျတော့မယျဆိုရငျ ရအေဆငျသငျ့ယူထား…..အသကျ ကို ဝအောငျရှူပွီအောငျ့ထားလိုကျ ….ခြိုကျခနဲနအေောငျသောကျခလြိုကျ ….အသကျမရှူနဲ့အုံးနျော …..သောကျပီး ပလုပျကငျြးလိုကျ ပီးမှအသကျရှူ အနဲငယျလောကျပဲညှီနံ့ရပါတယျ…ဘဲဥဘာအရသာမှမရှိဘူး နဲနဲခငျြတာပဲရှိတယျ….တနေ့၃ ခြိနျပေါ့နျော ၃ ရကျ ဆကျသောကျထာ သှေးတိုး ပွေးတော့တာပဲဗြို့
အဲ…သံပုရာသီးပါတဲ့အတှကျ ဖြားနသေူမြား မတညျ့သေးပါ ….အဖြားပွတျတော့ဆကျသောကျပေါ့ ….အကိုကျအခဲပြျောဆေးတှနေဲ့တော့ နီးနီးစပျစပျမသောကျထာကောငျးတယျ…..
သှေးတိုးသမားတှသေောကျကွစမျးပါလို့တိုကျတှနျး လိုကျရပါတယျ….ဖတျမိတဲ့သူမြား ရှယျပေးပါရနျ မတ်ေတာ ရပျခံပါတယျခငျဗြား….။ ကမျြးမာရေးမှတျစုမြား..သှေးတိုးလို့ စိတျမညဈနဲ့တော့ဗြာ.ဒီပုံထဲကလူကွီးကို ကြေးဇူးတငျတယျဗြာသငျ့ ရှယျရာ တဈခကျြဖွငျ့ လူပေါငျးမြားစှာရဲ့ ဒုက်ခဝဒေနာကို ကယျတငျပေးလိုကျပါ ဒီပုံထဲကလူကွီးကို ကြေးဇူးတငျတယျဗြာ.သှေးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရငျမခံနိုငျတော့ဘူး.
လညျပငျးတှအေဈထလာပွီးစုံးဖမျးသလိုနတျမမျးသလိုလိုနဲ့ ဂေါငျးတှေ ကိုကျ မကျြစိတှမှေုနျဝါးလာပွီး ခွထေောကျတလေကျတေ လေးလံထိုငျးမှိုငျးလာပွီး လငေနျးဖွတျဖို့ခညျြလုပျနတေယျ.အရငျ ၂ ခါလဲ လငေနျးဖွတျဖို့လုပျလို ဆေးရုံ ပွေးရသေးတယျ.သူပွောတဲ့အတိုငျးလုပျထား..အခု သှေးမတိုးတော့ဘူး ..
သူပွောတာတော့ ၃ ရကျ ဆကျတိုကျ မနကျတကွိမျ နလေ့ယျတကွိမျ ညတကွိမျ ၃ ရကျ ဆကျသောကျရငျ အနဲဆုံး ၆လ လောကျကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ စားခငျြတာစားလို့ရတယျဆိုပဲ..ကနြျောကတော့အခုမှသောကျထာဆိုတော့ သှေးတိုးကတွာပဲသြိသေးတယြ .ဓါတျပွောငျးတာဖွဈမယျ.
ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရညျအကုနျနဲ့ ဖြျော.အမယျနညျး ရှိသဗြ..သံပုရာသီးကို တခမျြးခှဲ ဖနျခှကျထဲအရငျထညျ့ အစတှေ့ဆေယျပဈလိုကျ.ဘဲဥ ကို ခှဲထညျ့လိုကျ အဲဒါကို နာနာခေါကျဖြျောလိုကျဗြာ.သောကျတော့မယျဆိုရငျ ရအေဆငျသငျ့ယူထား..အသကျကို ဝအောငျရှူပွီအောငျ့ထားလိုကျ .ခြိုကျခနဲနအေောငျသောကျ ခလြိုကျ .အသကျမရှူနဲ့အုံးနျော ..
သောကျပီး ပလုပျကငျြးလိုကျ ပီးမှအသကျရှူ အနဲငယျလောကျပဲ ညှီနံ့ရပါတယျဘဲဥဘာအရသာမှမရှိဘူး နဲနဲခငျြတာပဲရှိတယျ.တနေ့၃ ခြိနျပေါ့နျော ၃ ရကျဆကျသောကျထာ သှေးတိုး ပွေးတော့တာပဲဗြို့..အဲ သံပုရာသီးပါတဲ့အတှကျ ဖြားနသေူမြားမတညျ့သေးပါ .အဖြားပွတျတော့ဆကျသောကျပေါ့ .အကိုကျအခဲပြျောဆေးတှေ နဲ့တော့ နီးနီးစပျစပျမသောကျထာကောငျးတယျ..
သှေးတိုးသမားတှသေောကျကွစမျးပါလို့တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ.ဖတျမိ တဲ့သူမြား ရှယျပေးပါရနျ မတ်ေတာ ရပျခံပါတယျခငျဗြား.
Credit – ကမျြးမာရေးမှတျစုမြာ